Dastabej » संविधान दिवस:नेपालका संविधान कहाँ-कहाँ कसरी राखिएको छ?
संविधान दिवस:नेपालका संविधान कहाँ-कहाँ कसरी राखिएको छ? – Dastabej
संविधान दिवस:नेपालका संविधान कहाँ-कहाँ कसरी राखिएको छ?
बीबीसी । संविधानसभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानको सक्कल प्रति कहाँ र कसरी राखिएको होला? आइतवार ६ वर्ष पूरा भएको नयाँ संविधानको सक्कल प्रति सुरक्षित त छ?
तर पाँच फरक ठाउँमा राखिएको नेपालको नयाँ संविधानको सक्कल प्रतिबारे यस्तो चिन्ता गर्नु नपर्ने अधिकारीहरूको दाबी छ। नेपालको पछिल्लो संविधान वर्षौँ सम्म नष्ट नहुने र आगो र भूकम्पबाट पनि क्षति नहुने गरी सुरक्षित राखिएको दाबी गरिएको छ।
पाँचौँ शताब्दीदेखिका विभिन्न कागजपत्र र दस्ताबेजहरू सुरक्षित राखिरहेको राष्ट्रिय अभिलेखालयसँग सातमध्ये दुई वटा मात्रै संविधानका सक्कल प्रति छन्।
‘सेफ’भित्र संविधान कसरी राखिएको छ?
राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले नेपालका पुराना अभिलेखहरूको खोजी गरिरहेको छ।
खोज्ने क्रममा तत्कालीन राजदरबारमा समेत काम गरेका कतिपय पूर्व प्रशासकहरूबाट लाल बक्सा भनिने एउटा विशेष बाकसमा पुराना र महत्पूर्ण दस्ताबेजहरू रहेको जानकारी पाए पनि त्यो बाकस हालसम्म फेला नपरेको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले बताए।
विद्युतीय अभिलेखीकरणको सुरुवात’गरिने’
मन्त्रालयका सचिव उदय सापकोटाका अनुसार यो आर्थिक वर्षअघि नै नयाँ संविधान सहित पुराना संविधान र कानुनहरूको विद्युतीय अभिलेखीकरण सक्ने तयारी छ।
विद्युतीय अभिलेख पनि तीन किसिमले राखिने गरिएको अभिलेखालयकी प्रमुख प्रधानाङ्ग बताउँछिन्।
“संविधानको सक्कल प्रति बाहेक हामीले त्यसको माइक्रोफिल्म र विद्युतीय प्रति तयार गरेर राख्छौँ,” उनले भनिन्।
अभिलेख सङ्कलन र व्यवस्थित गर्नका लागि पर्याप्त जनशक्ति छैन। ३० जनाको दरबन्दी भएको कार्यालयमा २० जनाले काम चलाइरहेका छन्।
“हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति नै छैन। विभिन्न मन्त्रालयबाट सहयोग लिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थापनको काम ढिलो भइरहेको छ,” प्रमुख प्रधानाङ्गले भनिन्।
३ आश्विन २०७८, आईतवार १३:५० प्रकाशित